Isiokwu Halley Johnson na Martech Zone |
Edemede site na Halley Johnson kwuru
Halley Johnson kwuru
Halley Johnson bụ onye edemede na editọ ederede na-enweghị akwụkwọ. Onye na-arụrụ ọrụ ugbu a Earlylightmedia.com. O nwere akwukwo ole na ole edeputara n’okpuru aha nzuzo. Ha na-abụkarị abụ uri. Halley dị ugbu a na-ede akwụkwọ mbụ ya zuru ezu (ọ ga-abụ n'ezie aha ya n'ezie). Ihe kachasị rụpụta ya bụ ịbụ ezigbo nne ya na ezi nwa nne na nna ya.
Sọnde, Febụwarị 9, 2020 Sọnde, Febụwarị 9, 2020 Halley Johnson kwuru
Marketingzụ ahịa vidiyo aghọwo otu n'ime ụzọ kachasị elu iji zụọ ahịa n'ime afọ iri gara aga. Site na ọnụahịa nke akụrụngwa na mmemme mmezi ka ha na-adaba ka a na-ejikarị ha eme, ọ nwetala ọtụtụ ọnụ. Mmepụta vidio nwere ike ịbụ aghụghọ iji nweta oge ole na ole mbụ ị gbalịrị ya. Chọta ụzọ ziri ezi iji setịpụ vidiyo maka ire ahịa siri ike karịa edezi nkịtị. Have ga-etinye